Madaxwynihii hore Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta – Radio Daljir
Madaxwynihii hore Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta
Abriil 17, 2018 6:36 b 0
Madaxwaynihii hore dowladda faderaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta.
Sheekh Shariif ayaa sheegay dowladda Soomaaliya in looga baahanyahay inay hoos u dhigto xiisadda cirka isku sii shareeraya ee kala dhaxeeya dowladda Imaaraatka Carabta.
Isagoo waraysi siinayay telfishinka Al-Carabiya ayaa waxaa uu madaxwayne Sheekh Shariif sheegay Soomaaliya iyo Imaaraatka inuu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah oo ganacsi iyo mid siyaasadeed oo loo baahanyahay in la ilaaliyo.
Waxaa uu ku amaanay dowladda Imaaraatka inay ku taageerto dowladda dagaalka ay kula jirto ururada argagaxisada.
Hadalka Sheekh Shariif ayaa imaanaya iyadoo wasaaradda arimaha dibadda ee Soomaaliya ay soo saartay qoraal ay ku sheegayso inuu xiriir muhiim oo taariikhi uu ka dhaxeeyo labada dal, wax walbana lagu dhameeyo qaab wada hadal ah.
Imaaraatka Carabta ayaa dhowaan sheegay inuu joojinayo tababaradii iyo taakuladii uu siin jiray Soomaaliya, isagoo ka jawaabaya go’aankii ay dowladda ku qabtay lacag dhan 9.6 Million oo Imaaraatka uu diiday in la baaro, kana dejiyay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.